Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Seychelles » Ny sidina voalohany nataon'i Aeroflot dia tonga any Seychelles
Seychelles dia mandray an'i Aeroflot
Nisy Aeroflot Boeing 777 tonga tany amin'ny seranam-piaramanidina iraisampirenena Seychelles androany maraina, nanamarika ny serivisy mivantana natokana voalohany teo amin'i Moskoa sy ny Nosy Mahé.
deraina ho toy ny fiverenan'ny lehibe taorian'ny fiatoana 17 taona avy any amin'ireo nosy.
Nandray ny fiaramanidina canon rano, mpitendry mozika, mpandihy ary fialamboly ny fiaramanidina.
Manokatra ny làlan'ny sidina indroa isan-kerinandro eo anelanelan'ny firenena roa ny sidina, ary ny mpandeha rosiana izao dia afaka manidina tsy miato mankany amin'ny nosy alehany.
Ny sidina valo ora maharitra 35 minitra dia nankasitrahana ho 'fiverenana lehibe' satria niverina tany amin'ireo nosy i Aeroflot taorian'ny 17 taona.
Ny sidina dia niarahaba ny fahatongavan'ny minisitry ny raharaham-bahiny sy fizahan-tany any Seychelles, Sylvestre Radegonde, minisitry ny fiaramanidina sivily, seranan-tsambo sy an-dranomasina, Anthony Derjacques ary tompon'andraikitra hafa amin'ny sehatry ny fizahan-tany sy fiaramanidina.
Mpandeha miisa 402 no nidina ho any amin'ny tontolon'ny Creole mahazatra satria ny mpitendry zavamaneno sy mpandihy eo an-toerana dia nanome fialamboly mahafinaritra, taorian'ny nandalovan'ny fiaramanidina ny fiarahabana amin'ny canon rano.
Ny sidina manamarina dia manokatra ny làlan'ny sidina indroa isan-kerinandro eo anelanelan'ny firenena roa tonta, ary ny mpandeha rosiana izao dia afaka manidina tsy miato mankany amin'ny nosy alehany.
Handao an'i Mahé izao ny sidina miverina anio alina amin'ny 11.05 alina miaraka amin'ny ora fisidinana 8 ora 50 minitra. Taorian'ny fanapahana ofisialy ny tadiny dia naneho ny hafaliany tamin'ny Aeroflot ny minisitra Radegonde tamin'ny fiverenany sy ny fametrahana rohy mifamatotra eo amin'ny firenena roa tonta.
Niarahaba ny zotram-pitaterana an'habakabaka izy tamin'ity fampisehoana fahatokisana lehibe ity tany ho any nandritra ny fotoana nahitana fihenan'ny lalana tsy tambo isaina teo amin'ny indostria.
“Ny fiverenan'ireo sidina mivantana avy any Moskoa mankany Victoria dia manaporofo ny fahatokisan'ny kaompaniam-pirenena Rosiana ny indostrian'ny fizahantany eto amintsika. Seychelles dia toerana be mpitady indrindra any Russia sy any amin'ny Commonwealth of Independent States (CIS). Ny tsena rosiana dia tombony mahasoa hatrany ho an'i Seychelles, izay manasongadina ireo toerana fito ambony indrindra isan-taona. Tsena be vokatra izy io, miaraka amin'ny salan'isa 7 ka hatramin'ny 9 alina. Saingy ny fahatongavan'ireo mpitsidika dia nosakanan'ny tsy fisian'ny sidina mivantana avy any Mosko, "hoy izy.
Nofaritan'ny minisitra Radegonde ho toy ny fotoana mahafinaritra sy mahafaly ho an'ny firenena ny fihenan'ny fiaramanidina, ary manampy amin'ny famerenana ny indostrian'ny fizahantany Seychelles ny fiverenan'ny sidina.
Nanamarika ny minisitra Radegonde fa mahasoa ny tsena rosiana ary nilaza izy fa ny sidina mivantana dia hanampy amin'ny fanafainganana sy fampitomboana azy io bebe kokoa.
“Amin'ny alàlan'ny fampidirana sidina indroa isan-kerinandro ataon'i Aeroflot, antenaiko fa tsy afaka mamerina fotsiny isika, fa mampitombo kosa, ny anjarantsika amin'ny tsenan'ny Rosiana sy ny CIS. Ananan'ny fahafahantsika manao izany. Azontsika atao izany raha miara-miasa isika ekipa rehetra - ny governemanta sy ny sehatra tsy miankina miaraka. ”
Aeroflot dia manatevin-daharana kaompaniam-pitaterana efatra hafa, izay nanohy ny sidina nankany Seychelles, fa ny enina kosa antenaina hiverina eo anelanelan'ny aprily sy oktobra 2021.
Naneho ny hafaliany ihany koa i Aeroflot fa hiverina amin'ny làlan'ny Seychelles.
"Faly be izahay fa ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka eropeana voalohany niverina tany Seychelles tamin'ny 2021 niaraka tamina serivisy mahazatra teo anelanelan'i Moskoa sy Mahé, izay tsy isalasalana fa iray amin'ireo toerana fitsangatsanganana sy kanto indrindra eran'izao tontolo izao," hoy ny talen'ny varotra. , Anton Myagkov.
“Ny serivisy vaovao any Seychelles dia manasongadina tokoa ny tambajotran-dalan'i Aeroflot. Amin'ny maha-zotram-piaramanidina miasa manerantany antsika, ampifanarahanay tanteraka ny vokatra an-tsambo misy anay sy ny serivisy an-tsidina miaraka amin'ny vokatra fizahan-tany manokana any amin'ireo nosy Seychelles. ”
Nanampy Andriamatoa Myagkov fa ny fangatahan'ireo mpandeha amin'izao fotoana izao ho an'ity serivisy ity dia efa nihoatra ny nantenain'izy ireo rehetra, ka nahatonga ny sidina voalohany tao anatin'ny andro vitsivitsy. "Izany dia nahafahan'ny Aeroflot nampitombo ny fahita matetika amin'ny sidina roa isan-kerinandro manomboka ny alahady 09 aprily," hoy izy.
Manome hevitra momba ny sidina vaovao, ny Lehiben'ny Executive ao amin'ny Seychelles Tourism Board, Sherin Francis, izay nanatrika ny sidina Aeroflot ihany koa dia nilaza fa ny vaovao momba ny fiverenan'i Aeroflot dia nampientanentana azy tamin'ny varotra Seychelles.
“Faly izahay mandray an-tanana ity serivisy vaovao ity ho any amorontsiraka. I Russia dia iray amin'ireo tsena voalohany niavianay ary antenainay fa io zotra vaovao sy rohy mivantana io dia hanitatra ny fahazoantsika ny tsena sy io faritra io, ”hoy izy.
Nanampy izy fa ny fitomboan'ny fahaizan'ny seza dia manan-danja ary manasongadina ny fahatokisan'ny kaompaniam-pitantanana ny vokatra Seychelles, izay toerana tadiavina fatratra.